Infinity in a reed, akụkọ banyere akwụkwọ ahụ karịa ka a gwara ya | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Ule, Ndị edemede, Akụkọ ihe mere eme
Njedebe na amì bụ edemede nke onye edemede Zaralozan na ọkà mmụta ihe banyere ọmịiko bụ Irene Vallejo kwadebere. E bipụtara na 2019, ederede a na-echeta n'ụzọ zuru ezu akụkọ banyere okike na mmalite nke akwụkwọ site na narị afọ gara aga. Otu afọ mgbe e mesịrị, n'ihi ihe ịga nke ọma ya na nnabata ya, ọrụ ahụ natara ọtụtụ onyinye, otu n'ime ha bụ: Spanish National Essay Award and Critical Eye for Narrative.
Na edemede a, edepụtara ọrụ onye edemede, jisiri ike gafere 200.000 mbipụta rere ma ghọọ onye na-ere ahịa kacha mma. Ọrụ ya nwere nnwapụta dị ukwuu na ala Spanish, nke mere ka ọ banye mba ụwa, ebe atụgharịrị ya gaa karịa asụsụ 30 ruo ugbu a.
1 Njedebe na ahịhịa amị (2019)
1.1 Akụkọ nke amuru na nsogbu
1.2 Akụkọ dị iche na nke zuru ezu
2.1 Ọzụzụ ọkachamara
2.4 Egwuregwu edemede
2.4.1 Ihe owuwu
Njedebe na amì (2019)
Ọ bụ akụkọ karịrị peeji 400, nke na-akọ mepụtara akwụkwọ ahụ, otu akụkụ nke mmepe ya na ihe ndị dị mkpa mere n'oge akụkọ ntolite ya. N'ime ọrụ a, a kọwara ihe omume 3000 nke ihe omume, n'etiti oge gara aga na ugbu a. Edemede va kemgbe e kere akwụkwọ mbụ, ụlọ akwụkwọ mbụ na ndị na-agụ ụwa oge ochie, ruo ugbu a.
Site na ọrụ a onye ode akwụkwọ jisiri ike bụrụ nwanyị nke ise iji merie ihe nrite nke Spanish National Essay (2020), na mgbakwunye na ịnweta ozi ọma. N'etiti ịja mma, okwu Mario Vargas Llosa pụtara ìhè: “E dere ya ede nke ọma, nwee ezigbo akwụkwọ; ịhụnanya nke akwụkwọ na ọgụgụ bụ ikuku nke ibe nke ọkaibe a gafere ”.
Ebighebi na ahịhịa amị: ...
Akụkọ nke amuru na nsogbu
Onye dere akwukwo ahu n’eji ihe isi ike n’oge ezinulo Mgbe ọ malitere ide akwụkwọ a, nwa ya nwoke nọ na-arịa ọrịa. Ruo ọtụtụ ọnwa, ya na obere ya biri n'ụlọ ọgwụ. n’etiti ọtụtụ ọgwụgwọ ahụike, kemịkalụ, agịga na uwe ojii.
Ma Irene agbakwara akwụkwọ ọzọ, na-edezi edemede nke ya. Ka di ya na-enwe obi iru ala, ọ laa, jide akwụkwọ ndetu ya wee bido dee ya. N'ụzọ dị otú a, litterat ahụ nwere oge udo na udo, ewepụ oge nchekasị ahụ. N’achọghị iche na ọ ga-ede ihe ịga nke ọma nke ga-agbanwe ndụ ha.
Akụkọ dị iche na nke zuru ezu
Ọtụtụ katalọgụ Njedebe na amì dị ka edemede pụrụ iche na nke pụrụ iche, ebe ọ bụ na ọdịnaya ya zuru ezu ma dịgasị iche iche. N'ime ya, enwere ike ịchọta nkọwa ndị ọdịnala na nke ọdịnala dịka ọchị, uri, akụkọ, akụkọ ime obodo, akụkọ ndụ, mpempe akwụkwọ akụkọ na akụkọ. Na mgbakwunye na nnukwu akụkọ ihe mere eme dị n'oge trajectị ahụ zuru oke nke karịrị narị afọ 30.
Aha onye dere akwukwo mbu choro inye edemede ya bu: Iguzosi ike n'ihe dị omimi, ịsọpụrụ Borges. Mana emezigharịrị ya na aro ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ, nke ugbu a na-ezo aka na Pascal, onye rụtụrụ aka na ụmụ mmadụ "na-eche ahịhịa amị".
Ọrụ ahụ nwere akụkụ 2; nke mbụ: Greece na-eche ọdịnihu, nwere isi 15 zuru oke n'ime. N'ebe ahụ, akụkọ ahụ na-agafe n'ọtụtụ dị iche iche: ndụ na ọrụ nke Homer, agha agha nke Alexander the Great, nnukwu Ọbá akwụkwọ nke Alexandria - ebube ya na mbibi - Cleopatra. Ọzọkwa, oge siri ike nke oge ahụ na ihe ndị ọ rụzuru: mmalite nke mkpụrụ okwu, akwụkwọ mbụ na ụlọ ahịa akwụkwọ njem.
Mgbe ahụ ị nwere nke abụọ: Zọ ndị Rom. Ngalaba a nwere isi iri na itoolu, n'ime ha bụ: "Ndị Ọdee Akwụkwọ, Ndị Ọgaranya Ọgụgụ"; "Librero: ahia ahia"; "Ovid na - emegide ime nnyocha"; na "Canon: akuko nke okporo ahịhịa amị". Onye edemede ahụ kwupụtara na ọ dị onye nke atọ rutere n ’igwe igwe obibi akwụkwọ, ma kpebiri idebe ọdịnaya ahụ, dị ka ọ ga-eme ka edemede ahụ dị ogologo.
Ọ bụ edemede na na-ejegharị site na ịme akwụkwọ site na ihe dị iche iche, dị ka: anwụrụ ọkụ, okwute, ụrọ, ahịhịa, ọkpụite, papaịrọs, akpụkpọ anụ, na ìhè. Ihe bụ ihe ọzọ, na-akọghachikwa akụkọ ihe mere eme n’ime ya ka a kọwara ha: agha, ugwu mgbawa, obí eze Greek, mbido ọba akwụkwọ na ebe a ga-eji aka depụtaghachi ha.
N'oge akụkọ dị iche iche na-apụta ma na-emekọrịta, onye aghaghi imeri ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọdachi iji chebe akwụkwọ. Ọ bụghị banyere ndị dike, kama gbasara ndị mmadụ nkịtị: ndị nkuzi, ndị na-ere ahịa, ndị odeakwụkwọ, ndị na-akọ akụkọ, ndị nnupụisi, ndị ntụgharị okwu, ndị ohu, na ndị ọzọ.
N'otu aka ahụ, ọ na-ekwu maka akụkọ ntolite nke oge a; E gosipụtara akụkụ dị mkpa nke mgba ndị metụtara isiokwu edemede. Ihe ndekọ zuru ezu banyere ọkwa dị iche iche nke akwụkwọ gabigara na usoro nke ịdị ndụ ha dịka otu n'ime ụzọ dị mkpa iji kesaa ihe ọmụma.
Na 1979, obodo Zaragoza mụrụ Irene Somoza. Kemgbe ọ dị obere, ọ malitere mmekọrịta chiri anya n'ihi akwụkwọ ndị mụrụ ya na-agụrụ ya na ịkọ akụkọ tupu ha lakpuo ụra. Na 6 o zutere Odyssey, Nna ya kọọrọ ya akụkọ abalị ọ bụla dịka akụkọ, sikwa n’ebe ahụ na-achọkarị akụkọ banyere akụkọ ifo.
N’oge ulo akwukwo ya bụ onye emegburu mmegbu site n'aka ụmụ akwụkwọ ibe ya, ndị ọbụna tiri ya ihe. Ezinụlọ ya bụ isi nkwado n'oge a, ọ bụ ezie na ebe mgbaba ya bụ akwụkwọ. Maka Irene, a bịara n'ụlọ na ịgụ akwụkwọ dịka ụdị nzọpụta.
Onye edemede mere ihe omumu ya nke ka elu en mahadum nke Zaragoza na Florence, ebe ọ gụsịrị akwụkwọ ma mesịa nweta akara ugo mmụta na Oge gboo. Mgbe ọ gụchara ọrụ ya, ọ raara onwe ya nye ịmalite na ịgbasa ihe niile metụtara akwụkwọ ochie.
Akwụkwọ a bụ lụrụ onye na-eme ihe nkiri Enrique Mora, na onye o nwere nwa nwoke aha ya bu Pedro.
Na mgbakwunye na ọrụ ya dị ka onye edemede na ọkà mmụta mmekọrịta mmadụ na nwanyị, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye nkụzi na mahadum dị iche iche na mba ahụ. Ugbu a, na-ede edemede maka akwụkwọ akụkọ Spanish El País y Herald nke Aragon, nke amamihe oge ochie na-ejikọta isiokwu nke oge a. A chịkọtara ọtụtụ nyocha ndị a na ọrụ abụọ ya: Gara aga na-echere gị (2008) na Otu onye kwuru banyere anyị (2010).
Ode akwukwo ghaara ya akwukwo 8, post izizi ya bụ: The ọkụ ọkụ, a thriller na e wepụtara na 2011. Mgbe e mesịrị, ọ na-etinye aka n'akwụkwọ maka ụmụaka na ndị na-eto eto, na Onye mepụtara njem (2014) na Akụkọ banyere mmiri dị nro (2015). Ọ gara n'ihu na: Ọfụma onye na-agba ụta, akụkọ ịhụnanya na nke njem bipụtara na 2015.
Akwụkwọ ọhụrụ ya bịara na 2019: Njedebe na amì, y na obere oge ọ ghọrọ kacha ere. Enweela edemede a ọtụtụ ugboro kemgbe ebipụtara ya. Na mgbakwunye na Anya Nlekọta Anya (2019) na National Essay (2020), ọ nwetakwara ọdịiche: Los Libreros Recommend (2020), José Antonio Labordeta Prize for Literature (2020) na Aragón Prize 2021.
Ọbá akwụkwọ na okwu dị oke egwu-ederede na Marcial (2008)
Gara aga na-echere gị (2010)
The ọkụ ọkụ (2011)
Onye mepụtara njem (2014)
Akụkọ banyere mmiri dị nro (2015)
Ọkụ ụta (2015)
Otu onye kwuru banyere anyị (2017)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Ule » Njedebe na amì
Daybọchị izu ike ahụ furu efu